Wasiirka beeraha oo sheegay in dhawaan lacagahooda la siinayo beeraleyda Galeyda – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirka beeraha oo sheegay in dhawaan lacagahooda la siinayo beeraleyda Galeyda
Wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Mwangi Kiunjuri ayaa sheegay in laga bilaabo maalinka talaadada ah ay dowladu lacago siin doonto beeraleyda galeyda.
Beeraleydan ayaa maalmihii la soo dhaafay ka cabanayay in kastoo guddiga qaabilsan keydinta dhalagga ee (NCPB) ay galeey ku wareejiyeen haddana aysan lacago helin.
Mr.Kiunjuri ayaa sheegay in bixinta lacagaha lagu saleyn doono xaqiijinta guddigan.
Sido kale waxaa uu carrabka ku dhuftay in beeraleyda galeyda ay kaalin muhiimah ka qaataan wax soo saarka iyo dhaqaalaha beeraha sidaasi awgeed dowladu ay fulin doonto ballanqaadkii ay sameysay.
Mr. Kiunjuri ayaa xili uu ku sugnaa degaanka Kiamuiru ee ismaamulka Nyeri , shirkadaha booshada soo saaro ugu baaqay inay labadii kiila ku iibiyaan 75 shilin.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay inay beeraleyda dowlada ku leeyihiin 3.5 bilyan oo shilin taasina ay tahay deyn si dhameystiran loo gudi doono.
Magaalada Muqdisho waxaa markii ugu horeysay maanta lagu qabtay Munaasabad lagu Xusayay maalinta Beeraha Carabta oo sanadkiiba mar la qabta.
Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay Wasiirka Beeraha , xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, Safiirka jaamacadda carabta u fadhiya soomaaliya, wafdi ka socday dalalka jaamacadda carabta, wakiilka soomaliya u fadhiya Hey’adda FAO , qubaro ku xeel dheer arimaha beeraha iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay.
Masuuliyiinta xaflada kasoo qeyb gashay ayaa ku dheeraaday ka Hadalka qiimaha ay leedahay maalinta beeraha carabta, waxeyna dhinaca kale isla meel dhigeen sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta wax soo saarka dalalka jaamacadda carabta oo ay soomaaliya qeyb ka tahay.
Ugu dambeyn wasiirka Beeraha iyo waraabka Mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa hadiyaddo gudoonsiiyey qaar kamida marti sharaftii kasoo qeyb gashay xuska munaasabadda maalinta beeraha carabta oo markii ugu horeysay la asteeyay sanadkii 1972.
← DHAGEYSO Olole loogu jiro in lagu bedelo dastuurka oo muran dhaliyay
DHAGEYSO Madaxweyne ku xigeenka dalka oo ku baaqay inaan dowlada faragelin lagu sameynin →